ချစ်ကြည်အေး: November 2010
at November 29, 2010 45 comments: Links to this post
at November 24, 2010 27 comments: Links to this post
အိပ်ခန်းအတွက် ခန်းဆီးဆိုရင် ပါးပါးလွင့်လွင့်တွေကို မတပ်ဘဲ အလင်းပိတ်အောင် ထူတဲ့ ခပ်လေးလေး ခပ်အိအိတွေကိုမှ ကျမက ရွေးချယ်လေ့ရှိတယ်။ ခု လက်ရှိ အခန်းထဲမှာ ကြက်သွေးရင့်ရင့်နဲ့ အဝါဖျော့ဖျော့ ခပ်ယှက်ယှက် နွယ်ငင်ထားတဲ့ ခန်းဆီး ထူအိအိ တစုံကို တပ်ဆင်ထားတယ်။
အအိပ်ခက်သူပီပီ အဲ့သည်ညက တော်တော်နဲ့ အိပ်မရနိူင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကလည်း ဖြစ်နေကျမို့ ကျမအတွက် ထူးလှတယ် မဟုတ်ပါဘူး။ မီးပိတ်ထားတာရယ်၊ ခန်းဆီးထူထူတွေရယ်ကြောင့် အိပ်ခန်းထဲမှာ အလင်းစလေး တစက်တလေတောင်မှ ကျ မနေခဲ့ဘူး။ ဒါဟာလည်း ခါတိုင်းညတွေလိုပဲ နဲနဲမှ ထူးခြားတဲ့ ည မဟုတ်ခဲ့တာ။ အိပ်ခန်းထဲ မီးရောင်လဲ့လဲ့ ရှိနေရင် အိပ်မပျော်တတ်တဲ့ ကျမအတွက်တော့ သည်လို အနေဟာ ကျမ အကြိုက်ပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အိပ်မပျော်သေးတာက လွဲလို့ အရာအားလုံးဟာ ကျမ စိတ်တိုင်းကျ ရှိနေခဲ့တာ။
မနက်ဖြန် အလုပ်သွားရမယ်။ ကျမ အိပ်ရမယ် အိပ်ပျော်မှ ဖြစ်မယ်။ အဲသည် အိပ်ပျော်မှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာကြီးက လူအပေါ် ဖိအားအဖြစ် ပြောင်းသွားတယ်။ အိပ်စမ်း လို့ ဆိုလေ အိပ်မပျော်လေ။ ထွက်လေ ဝင်လေမှတ်။ စိတ်ကို နှာသီးဖျားမှာ တင်ထား။ ဟုတ်ပြီ မှန်မှန်လေး အသက်ရှု...။ မှတ်... ထွက်လေ ဝင်လေမှတ်။ မျက်တောင်တွေ လေးလာတာကို သိနေတယ်...သိနေတယ်။ ကျမ အိပ်တော့မှာ။ မကြာခင် အိပ်ပျော်တော့မှာ အိပ်လိုက်...အိပ်လိုက်တော့။ ဟင့်အင်း မအိပ်ချင်သေးပါဘူး...မအိပ်သေးဘူး... မှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေ ဖျတ်ကနဲ ပြန်ပွင့်သွားတယ်။
မျက်လုံးဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ သည်လောက်တောင် မအိပ်ချင်တာ အိပ်ဖို့ မကြိုးစားချင်တော့ဘူး။
အဲသည်ခဏ မျက်လုံးရဲ့ရှေ့မှာ ကျမ မြင်လိုက်ရတာက ထူပိန်းပိန်း အမှောင်ထုကြီး။ ရုတ်တရက် ကျမ အံ့သြသလိုလို၊ အားငယ်သလိုလို။ ကြိုးစားပြီး မြင်အောင် ထပ်ကြည့်တယ်။ အမဲရောင် နံရံ အချပ်လိုက်ကြီး ကျမရှေ့မှာ ဆီးကာထားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ အသက်ရှုကြပ်လိုက်တာ။ တွင်းနက်ကြီးထဲ ကျနေသလို...ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး လေးလံလို့ လှုပ်မရ၊ ချွေးစေးတွေနဲ့ အာခေါင်တွေ ခြောက်သွေ့။ ကြောက်စရာ အမှောင်ထုကြီးထဲ ကျမ လုံးလုံးလျားလျား ထိုးကျသွားခဲ့ရတဲ့ ည...။
ကျမ သိတယ်။ ကျမ အမြင်အာရုံတွေ ကောင်းနေသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ မမြင်ရဘူး။ ကျမ အကြားအာရုံတွေ ကောင်းနေသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ မကြားရဘူး။ ကျမ အော်ဟစ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံသာရှိပြီး စကားလုံးတွေ ဆွံ့အ နေပြန်တယ်။ ဒါဟာ အမှောင်ထုရဲ့ မုန်းတီးစရာကောင်းတဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ။ ကျမ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျမ စွမ်းနိူင်သေးတာ သေချာတယ်။ သည်ညကို ကျော်လွန်ဖို့တော့ ခံနိူင်ရည် မွေးရမယ်။ မနက်ဖြန် အာရုံလာရင် ရောင်နီအလင်းတန်းတွေကို မျှော်လင့်နိူင်သေးတယ်။
ခုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမ တွေးနေနိူင်သေးတယ်။ အတွေးစတို့ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနေနိူင်သေးတယ်။ အမှောင်ထုဟာ စိတ်တွေ၊ အတွေးစတွေကိုတော့ဖြင့် ချုပ်ကိုင်ဖို့ မစွမ်းနိူင်ပါဘူးလေ။
ကျမ အတွေးစတွေဟာ မမြင်နိူင်၊ မကြားနိူင်၊ အသံမပြုနိူင်သူတွေရဲ့ ဘဝတွေထဲ ကိုယ်ချင်းစာတရားများနဲ့ ဖြတ်သန်း ကြည့်မိပြန်တယ်။
သူတို့ ဘယ်တော့မှများ အလင်းရောင်ကို မြင်တွေ့ခွင့် ရကြမလဲ။ သူတို့ရဲ့ အမြင်၊ သူတို့ရဲ့အတွေး၊ သူတို့ရဲ့ အသံတွေ....။ ကျမ မျှော်လင့်တဲ့ မနက်ဖြန်လို သူတို့တွေရဲ့ မနက်ဖြန်ကရော....။ ကျမ ရင်ထဲ စိမ့်ကနဲ နာကျင်သွားခဲ့တယ်။ သဘာဝတရားအရ အမှောင်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အလင်းဆိုတာ ရှိတယ်။ မမြဲတဲ့ သဘောအရ အမှောင်ဟာ သူ့အတွက် အချိန်တချိန် ကျော်ဖြတ်ပြီး အလင်းကို အလှည့်ပေးရလိမ့်ဦးမယ်။
အမှောင်ထဲမှာပဲ မြင်နေရတဲ့ အမှောင်ထုကြီးကို ကျမ ပြုံးကြည့်နေလိုက်တယ်။
at November 19, 2010 20 comments: Links to this post
၂၀၁၀အတွက် ရေပန်းအစားဆုံး စကားလုံးတွေကို Global Language Monitorအဖွဲ့က 14Novမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့ စကားလုံးတွေက ရှိပြီးတာ ကြာနေတဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ။
ဒီနှစ်အတွက် ရေပန်းအစားဆုံး စကားလုံးတွေကို ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တာရာယ်တွေ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ၊ လက်ရှိ နိူင်ငံရေးလောကမှ အမြီးအမောက်မတည့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ၊ စကားလုံးအဟောင်းတွေအတွက် အသုံးအနှုန်း အသစ်တွေ၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ စီးပွားရေးလောကသုံး စကားလုံးတွေထဲကနေ ထောင်ပေါင်းများစွာသော သုံးစွဲသူများမှ နေ့စဉ်သုံးစကားလုံးများအဖြစ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြတဲ့ စကားလုံးတွေကိုမှ ရွေးချယ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Reflecting the global impact of the months-long oil spill in the Gulf of Mexico
The noisy South African horns at the World Cup soccer tournament
Though used at least since The Narrative of the Life of Frederick Douglass in 1845, ‘The Narrative’ has recently been gaining traction in the political arena, virtually replacing the need foraparty’s platform. (Cf. to ‘truthily’.)
Conflation of “refute” and “repudiate” (un)officially coined by Sarah Palin.
5.Guido and Guidette
Hey! All things Jersey are hot, capish? (Actually, capisci in standard Italian.)
A growing and possibly intractable problem for the economies of most of the developed world.
7.Snowmaggedden (and ‘Snowpocalypse’)
Portmanteau words linking ‘snow’ with ‘apocalypse’ and ‘armageddon’, used to describe the record snowfalls in the US East Coast and Northern Europe last winter.
Three-dimensional (as in movies) is buffo box office this year, but 3-D is being used in new ways generally describing ‘robustness’ in products (such as toothpaste).
President Obama’s description of the ‘old-fashioned thumpin’ in George W. Bush’s words, that Democrats received in the 2010 US Mid-term elections.
The paradox of simplifying complex ideas in order to make them easier to understand, the process of which only adds to their complexity.
“Our top words this year come from an environmental disaster, the World Cup, political malapropisms, new senses to ancient words,abooming economic colossus, andaheroic rescue that captivated the world for days on end. This is fitting forarelentlessly growing global language that is being taken up by thousands of new speakers each and every day,” said Paul JJ Payack, President of The Global Language Monitor. The words are culled from throughout the English-speaking world, which now numbers more than 1.58 billion speakers.
မက္ကဆီကို ပင်လယ်ကွေ့မှာ လပေါင်းများစွာ ဆီယိုဖိတ်မှု ဖြစ်ရပ်ကို မျက်နှာလွှဲပြီး English coastမှာ သားငယ်နဲ့အတူ ရွက်လှေပြိုင်ပွဲ သွားကြည့်နေခဲ့တဲ့ BP ရဲ့ CEO Tony Hayward ကို အမှတ်ရကြဦးမယ်ထင်ပါရဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျူလိုင်မှာ သူ ရာထူးက နှုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရတာ။ Spillcamက အဲဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး သုံးစွဲခဲ့ကြတဲ့ စကားလုံးပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားက Vuvuzela လို့ခေါ်တဲ့ ဆူဆူညံညံ အာဖရိက ခရာမှုတ်သံကိုတော့ အားလုံးပဲ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ စကားလုံး ၂လုံးက ၁ နဲ့ ၂ နေရာမှာ ယူထားကြပါတယ်။
ကျန်တဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ တချို့ရင်းနှီးပြီးသား၊ တချို့လည်း အသစ်တွေ ဖြစ်နေနိူင်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဘာ့ကြောင့် လူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျား ရေပန်းစားခဲ့ရသလဲ ဆိုတာ အဖြေထုတ်ကြည့်ကြပါဦးလေ။
ဒါက ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ၂၀၁၀အတွက် ရေပန်းစားနေတဲ့ လူပြောအများဆုံး စကားလုံးတွေပါ။ ၂၀၁၀အတွက် ရေပန်းစားနေတဲ့ စကားစုတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်နိူင်ပါတယ်။
ခုလောလောဆယ် ကျမတို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ၂၀၁၀ အတွက် လူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျား ရေပန်းအစားဆုံး စကားလုံးကရော ဘာများ ဖြစ်နိူင်မလဲ။ ပြီးတော့ ရေပန်းအစားဆုံး ဝါကျကရော...။
ကျမ သေချာပေါက် သိနေပါတယ်။ ၂၀၁၀ အတွက် လူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျား ရေပန်းအစားဆုံး စကားလုံးက "အမေ" ဖြစ်ပြီး ရေပန်းအစားဆုံး ဝါကျက "အမေ ကျန်းမာပါစေ"ပဲ ဖြစ်မယ် ဆိုတာ....။
at November 15, 2010 14 comments: Links to this post
at November 10, 2010 25 comments: Links to this post
ကျောင်းသားဘဝဆိုတာ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း အများစုက အပူအပင်မဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့ကြရတာပါ။ ကျောင်းနဲ့အိမ် အိမ်နဲ့ကျောင်း အကြား ပြေးလွှား စာကျက် စားသောက် နောက်ပြောင်ကြရင်း တနှစ်ပြီး တနှစ် ကုန်ခဲ့ကြတာ။ ရည်မှန်းချက် ကြီးမားသူ မဟုတ်တဲ့ ကျမအတွက်တော့ စာမေးပွဲနီးမှ စာကုန်းကျက်ပြီး အများနည်းတူ စာမေးပွဲ အောင်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျမ မိဘများကို အလွန် ကျေးဇူးတင်မိတာက ကျမကို ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဖိအားပေးလေ့ မရှိတာပါပဲ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အမေက "ဟဲ့ နင် စာမကျက်ဘူးလား ဟိုဘက်အိမ်က ကလေးတွေများ စာအော်ကျက်နေလိုက်ကြတာ" ဆိုရင် စာဖတ်ဖို့ကိုင်ထားတဲ့ စာအုပ်တောင် ဘေးချပြီး အဲဒီ့တနေ့လုံး စာမကျက်တော့တာ။ ခုမှ အဲဒီတုန်းက ကျမကို ပြောမရလို့ အမေ အတော် စိတ်ဆင်းရဲခဲ့မှာ လို့ တွေးမိတယ်။ နောက်တော့ အမေက ကျမကို စာလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မပြောတော့ဘူး။ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် လုပ်တတ်မှန်း၊ သူများနဲ့ ယှဉ်ပြောရင် မကြိုက်မှန်း အမေ သိသွားလို့ပဲ ဖြစ်မယ်။ ဒါက ကျမရဲ့ ငယ်ဘဝထဲက ပုံရိပ် တပိုင်းတစပေါ့။ ဪ...ဘလော့်ဂါဖြစ်လာမဲ့ ကလေးများ ငယ်ကတည်းက တယ်ခေါင်းမာတာ....
ကျမ တက်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းကြီးက အီကိုလို့ ခေါ်ကြတဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာပါ။ မှတ်မိသေးတယ်။ ပထမနှစ်မှာ ဆက်ရှင် ၆ခု ရှိတဲ့အထဲ ကျမက ဆက်ရှင် ၅ မှာ တက်ရပါတယ်။ ဆက်ရှင် ဝမ်းတို့ တူးတို့က ကျောင်းသူတွေလို ဆေးကျောင်းပြုတ်၊ စက်မှုပြုတ် မဟုတ်ပဲ နောက်ဆုံးနား မရောက်ခင်လေးတင် ကပ်ပြီးဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ဆက်ရှင်တူ ကျောင်းသူတွေ အချင်းချင်း အပွေးမြင် အပင်သိခဲ့ကြပါရဲ့။ ကျမတို့ ၈ယောက်အုပ်စုကြီးဟာ အတန်းလစ်လည်း အတူတူ၊ အတန်းတက်လည်း အတူတူ၊ စာမေးပွဲနီးလို့ စာတွေလိုက်ကူးလည်း အတူတူ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျမတို့အုပ်စုက ခပ်ပျော်ပျော်တွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် အစအနောက်လည်း သန်ကြတော့ အီကိုမှာ ရှားပါးမျိုးနွယ်ဖြစ်လေတဲ့ မဟာပုရိသတွေ ခမျာ ကျမတို့ ကျောင်းသူတွေရဲ့ ဒဏ်ကို အတော်လေး ခံစားကြရရှာပါတယ်။ ကျောင်းသားတယောက်ထဲများ ရှေ့က ဖြတ်မသွားနဲ့ ဘေညာ ဘေညာ ဘေညာဘေး ဆိုပြီး ဝိုင်းအော်လို့ ကျောင်းသားခမျာ ပုဆိုးတွေဘာတွေ တုတ်ပြီး ခလုတ် မတိုက်ရုံတမယ် ဖြစ်ရရှာတာ။ ပိုက်ဆံကို ကြိုးနဲ့ အသာချည်ပြီး အခန်းဝ ကော်ရစ်ဒါမှာ ချထား။ မလှမ်းမကမ်းက ကြည့်ပြီး ကုန်းကောက်တော့မှ အတန်းထဲကနေ တယောက်က ကြိုးနဲ့ ပြန်ဆွဲတာမျိုး၊ နောက်မှာ အမြီးတပ်လိုက်တာမျိုး သကောင့်သားတွေ စုံအောင် ခံရရှာပါတယ်။
တချို့ ခပ်ပျော့ပျော့ ကျောင်းသားတွေကိုဆို "နင် ငါတို့ရှေ့မှာ အိညှောင့် အိညှောင့်လာလုပ်မနေနဲ့ ရည်းစားစာ လိုက်ပေးလိုက်မယ် ဘာမှတ်နေလဲ" လို့ ငေါက်တတ်သေးတာပါ။ အဲသလို ကျမတို့ကျောင်းမှာ ရေများရေနိူင် မီးများမီးနိူင် ဆိုသလို မဟာပုရိသတွေခမျာ အားနွဲ့သူတွေ အဖြစ် ရောက်ကြရတော့တာ။
ပထမနှစ်မှာ ကျမတို့ အတန်းထဲက ကောင်လေးချောချောတယောက်ကို ကျမတို့ဘာသာ ကင်း ပေးထားပါတယ်။ တကယ်လည်း မောင်မယ်သစ်လွင်နေ့မှာ ပါးစပ်နဲ့ ကင်းရွေးကြရော တခြားဆက်ရှင်က တယောက် ရသွားလေတော့ သူ့ခမျာ အလိုလိုနေရင်း ရာထူးလျောပြီး ကင်းပြုတ် ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တနေ့ တနေ့ အတန်းထဲရှိတဲ့ ကင်းပြုတ်ကိုပဲ အိပ်ချင်ပြေ ကြည့်ခဲ့ကြရတာ။ ကျမတို့ရဲ့ မဟာကျေးဇူးရှင် အိပ်ချင်ပြေလေးပေါ့...
အတန်းထဲမှာ နောက်ထပ် အိပ်ချင်ပြေတယောက် ရှိပါသေးတယ်။ သူကတော့ နယ်ကျောင်းသား တယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ ဖက်ရှင်ကို ပြောပြပါဦးမယ်။ အဲဒီတုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ အိတုန်၊ အိရှန်၊ လှိုင်းကြီး အစတွေကို ရှပ်လက်ရှည် ချုပ်ဝတ်ပြီး အောက်က ရခိုင် ပုဆိုး၊ ပိုးလိုလို ခပ်ပြောင်ပြောင် ပုဆိုးတွေနဲ့ တွဲဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အပေါ်က အဝါနုဆို ပုဆိုးက အဝါရင့်၊ အပေါ်က ဗေဒါနုဆို အောက်က ဗေဒါရင့် ဆိုတော့ကာ သူ့ကို ကျမတို့ အုပ်စုက နတ်ကတော် လို့ နာမည်ပြောင် ပေးထားပါတယ်။ တနေ့ တနေ့ သူ ဘာအရောင်များ ဝမ်းဆက် ဝတ်လာလေမလဲ စောင့်ကြည့် ရယ်ကြရတာ အမောပါပဲ။
သူ့ရဲ့ပုံကို အနီးစပ်ဆုံး ပြောရရင် ဝမ်း ၆ခါလောက် လျှောထားတဲ့ မင်းသား သျှားညိုကို မျက်မှန်သာ ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ကြပါ။ သူ့မှာ ငွေသွားကြီး တချောင်းကလည်းရှိ၊ မိဘတွေကလည်း သနပ်ခါးခြံပိုင်ရှင်မို့ ကျမတို့ အချင်းချင်း စိတ်ကူးမလွဲကြဖို့ ပြောရင်း သူ့နောက်ကွယ်မှာ သူ့ကို ဘော်လီဘော ပုတ်သလို တယောက်ဆီကနေ တယောက် ပုတ်ထုတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပထမ စာသင်နှစ်ဝက်ပြီးလို့ ဒုတိယ စာသင်နှစ် အစမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်တခု ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အတန်းပြီးလို့ ထွက်လာတဲ့ ကျမတို့ အုပ်စုနောက်ကို သူ နောက်ကနေ အပြေးလိုက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမ နာမည်ကို ခေါ်ရင်း သူ့လက်ထဲက ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ ထည့်လာတဲ့ သနပ်ခါးတုံးတွေကို ကျမလက်ထဲ အတင်းထည့်ပါတော့တယ်။ အားလုံး တအံ့တဩနဲ့ ကြောင်အအ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကျမ ခပ်သွက်သွက် လျှောက်ရင်း ရှေ့က နားနေခန်းထဲ စွပ်ကနဲ ဝင်ပြေးခဲ့မိတော့တယ်။ အမျိုးသမီး နားနေခန်းမို့ သူ ဝင်လိုက်လာလို့ မရဘဲ အခန်းရှေ့မှာ တောင့်တောင့်ကြီး ရပ်စောင့်နေခဲ့တာ စာသင်ချိန် တချိန် လွတ်တဲ့ အထိပါပဲ။ ကျမ ကောင်းကောင်းကြီး ဝဋ်လည်တာပါ။ ကျမ အလှည့်ကျတော့ အဲသလို ကြောက်ဒူးတုန်ခဲ့မိတာ။ ကျမ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အဲဒီ့အတွက် ကျမကို ဟားတိုက်မဆုံးပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့ သူ့ခမျာ အဝေးကနေပဲ ခေါ်တောတထောင်အားနဲ့ လှမ်း လှမ်း ကြည့်ရုံပဲ တတ်နိူင်ပါတော့တယ်။
အုပ်စုထဲမှာမှ ကျမက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် အလုပ်ဆုံး၊ ဘယ်နေရာမှလည်း မထူးချွန်ဆုံးပါပဲ။ ကျောင်းအနုပညာအသင်းမှာ သီချင်းဆိုမလား၊ နံရံကပ် စာစောင်မှာ ပန်းချီဆွဲမလား (အမှန်ကတော့ တကြောင်းဆွဲ ကာတွန်းလောက်ရယ်ပါ)၊ ကဗျာရေးမလား စုံတကာစိနေအောင်ပါပဲ။
ကဗျာဆိုလို့ ဘရုတ်ကျဖူးတဲ့ အဖြစ်တခုကို သတိရမိသေးတယ်။ အတန်းထဲမှာ အင်မတန် အေးတဲ့ စာဂျပိုးကျောင်းသား တယောက် ရှိတယ်။ အသားဖြူဖြူ၊ ပိန်ကိုင်းကိုင်း၊ ကော်ကိုင်းမျက်မှန် အနက်နဲ့ပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ စာသင်ချိန်တခုမှာ သူ့ခုံနောက်က ကျမတို့အုပ်စု ဝင်ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ချိန်ပြီးလို့ ဆရာမ အခန်းထဲကအထွက်မှာ ဘောလ်ပန်ကို တမင် သူ့ခုံအောက်ကျအောင် ကျမ လွှတ်ချ လိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ သူ့ကို ကောက်ခိုင်းတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ကျမ ကဗျာတိုလေး တပုဒ် ကောက်စပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီကဗျာကို သူငယ်ချင်း တယောက်က အသံနေ အသံထားနဲ့ သူကြားတယ်ဆိုရုံ ဖတ်ပြပါတယ်။
ကျေးဇူး ဆိုတဲ့ စကားလေး နှစ်လုံး
နောက်ဆုံး "ကွယ်" ဆိုတာကို သူက "ကွယ်...ဟယ် ဟယ်" ဆိုပြီး ကွန့်ပြီး ဖတ်ပြတာပါ။ ကျမတို့က အေးလွန်းတဲ့ ကျောင်းသားမို့ စ ချင်ရုံပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့အုပ်စုကို တွေ့တိုင်း သူ့မှာ မျက်နှာတခုလုံး ရဲနေအောင် ရှက်နေရှာတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ၈၈ အရေးအခင်း အပြီးမှာ ကျောင်းမပြီးခင် သူ နိူင်ငံခြား ထွက်သွားတယ် ကြားပါတယ်။ ကျမတို့ ပယောဂတော့ ဟုတ်ဟန် မတူပါဘူးလေ....:)
ကျောင်းမှာ အပျော်ဆုံးက ပထမနှစ်နဲ့ ဒုတိယနှစ်တွေမှာပါ။ ကျမက ရန်ကုန်သူမို့ အဆောင် မရပေမဲ့ ကျောင်းအနုပညာသင်းရဲ့ သင်္ကြန်ဖြေဖျော်ပွဲတွေမှာ ကျောင်းကအဆောင်တွေမှာ Camp ဝင်ပြီး သွားနေရပါတယ်။ နှင်းဆီတို့ ဂန္တမာတို့ မှာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ဂစ်တာတီးတဲ့ အကိုကြီးတွေက ဗိုလ်ပြား၊ ဗိုလ်ရွဲနဲ့ အော်ဂင်က ကိုမိုက်လို့ ကျမတို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ ခု ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးပါ။ အဆောင်ရှေ့မှာ ည ည ဂစ်တာ လာတီးတဲ့ အထဲမှာ တချို့ အဆိုတော်တွေလည်း ပါ ပါတယ်။ အခန်းမီးတွေ ပိတ်လိုက် ဖွင့်လိုက် လုပ်ပြကြ၊ လဘက်တွေ ဇီးပေါင်းထုပ်တွေ ပို့ပေးကြနဲ့ တကယ်ပဲ အဆောင်နေ ကျောင်းသူဘဝကို ခတ္တ ခံစားရရှိစေတဲ့ ရက်တွေမို့ သိတ်ပျော်ခဲ့ရပါတယ်။
နှစ်စပိုင်းတွေမှာ ဆေးက၊ စက်မှုက ကျောင်းသားတွေ လာပိုးတာကို ဘဝင်လေဟပ်နေတဲ့ အီကိုမမတွေဟာ နောက်အတန်းတွေ ကြီးလာတဲ့အခါ ဟိုမောင်တွေမှာ စာတွေနဲ့ နပန်းလုံးပြီး မြာဘက် မလှည့်နိူင်ဖြစ်၊ ဒီမှာလည်း ကျောင်းပြီးခါနီးမို့ အသည်းအသန် ကြင်လျာတော် ရှာကြရင်း နောက်ဆုံးတော့ အီကိုမမတွေခမျာ ကိုယ့်ခြံထဲကကြက် ကိုယ် ရိုက်စားရတဲ့ ဘဝ ရောက်ရရှာတာ "တို့ အီကို ကျောင်းသားတွေကတော့ အဲဒီအချိန် မျက်နှာပွင့်ချိန်ပေါ့ကွာ" လို့ ကျမတို့ အီကို ကျောင်းသူတွေကို သနားဟန်နဲ့ ပြောကြလေတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပေါ့လေ ကျမတို့ အီကိုကျောင်းသူတွေရဲ့ လက်သုံးစကားက ရွာနားကမြက် ရွာနွားမစားပါပဲ။ နဲနဲမှ မလျှော့ပါဘူး။
ဘယ်ကျောင်းသားကပဲ လာကြိုက်ကြိုက် ကျမတို့ အုပ်စုက ဝိုင်းပြီး နှိပ်စက်ကြတဲ့ဒဏ် မခံနိူင်ဘဲ ပြေးကြရတာ။ ဒုတိယနှစ်ပြီးတဲ့အထိ ဘယ်သူမှ ရည်းစား မထားကြပဲ လှည့်ပတ်ပြီး ဘရုတ်ကျနေခဲ့ကြတာ။ တတိယနှစ်စမှာတော့ သူငယ်ချင်းမတယောက်ရဲ့ လျို့ဝှက် အချစ်ရေးကြီးထဲမှာ ကျမတို့ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြရတယ်။ သူ့ ချစ်သူ အကိုကြီးက ဘွဲ့မရဘဲ ကျောင်းထွက်ပြီး သူတို့ ဆန်ပွဲရုံမှာ အလုပ် ဝင်လုပ်နေတာ။ ဒီတော့ မိဘများက သမီးနဲ့ သဘောမတူနိူင်ဘူးပေါ့လေ။ ကျမတို့က သူငယ်ချင်းကို အိမ်က ခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြရ ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက လူကြီးတွေကို မုန်းလိုက်တာလေ။ ပကာသနမက်၊ ဂုဏ်ဓနမက်...ဒါတွေ ဘာလုပ်ဖို့လဲပေါ့...အရေးကြီးတာက အချစ် အချစ် အချစ် မဟုတ်လားပေါ့လေ...ခုနေ တွေးမိတော့ ရယ်ချင်စရာ။ (ခုတော့ ကျမ သူငယ်ချင်းမက သူ့ချစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးလို့ ကလေး ၂ယောက်ရ၊ ဘဝမှာ နေပျော်စွာ ရှိနေပါရဲ့)
ကျောင်းတုန်းကပုံတွေ ကျမမှာ များများစားစား မရှိပါဘူး၊ ဒီပုံတွေတောင် ရုံးကလူတွေကို တကယ် ဘွဲ့ရခဲ့တာလို့ ပြချင်လို့ ရွာအပြန် အိမ်က ယူလာတာပါ။ နိူ့မို့ဆို ကိုယ့်ဘွဲ့လက်မှတ် နွမ်းဖတ်ဖတ်လေးကို အတုလို့ ထင်တတ်ကြလွန်းလို့....:)
တတိယနှစ်မှာ ဘာသာရပ်တွေခွဲတော့ ကျမတို့အုပ်စုလည်း ကွဲသွားခဲ့ကြတယ်။ အတန်းအားချိန် တူတိုင်း အရင်လို ပြန်တွေ့ဖြစ်ကြပေမဲ့ ကျမက သူငယ်ချင်း အသစ်တွေ ထပ်ရခဲ့ပြန်တယ်။ ကျမက တကျောင်းလုံးနဲ့ ပေါင်းတဲ့သူမို့လေ။ နောက်ပိုင်း ၈၈ အရေးအခင်းနဲ့ ကျောင်း ၃နှစ်ပိတ်၊ ပြန်ဖွင့်တော့လည်း ကျောင်းမှာ အရင်လို သင်္ကြန် ဖြေဖျော်ပွဲတွေ မလုပ်ကြတော့တဲ့အပြင် ကျောင်းဝင်းထဲ လက်နက်ကိုင်ထားသူတွေ စောင့်ကြပ်နေတာတွေ့ရင်ပဲ ရင်ထဲ ဝမ်းနည်းသလိုလို၊ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေအတွက် စိတ်ထဲ မပျော်ခဲ့ကြတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ၄နှစ်တာ ကျောင်းပြီးလို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း တနေရာစီ ကွဲခဲ့ကြရတာ။ တချို့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျောင်းမှာပဲ စာပြန်သင်နေကြတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းထဲကို သွားမတွေ့ဘူး။ ကျမ မခံစားနိူင်လို့ပါ။
တနှစ် ရွာအပြန်မှာ သူငယ်ချင်းမ တယောက်နဲ့ ချိန်းရင်း သူ့အိမ် သွားလည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ရုံးမှာ အတူ အလုပ်လုပ်ဖော် အမျိုးသားတဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ချစ်စဖွယ် သမီးကလေးတယောက် ရနေပါပြီ။ မမျှော်လင့်ပဲ သူက ကျမ ကျောင်းတုန်းက ပေါက်ကရ စပ်ထားတဲ့ ကဗျာ အတိုအစလေးတွေ စတက်ပလာနဲ့ စုချုပ်ထားပြီး တခုတ်တရ သိမ်းထားရှာတာ ကျမကို ထုတ်ပြပါတယ်။ ကျမ ပြောမပြတတ်အောင် ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျမကတော့ ရေးပြီး သံယောဇဉ် မထားတတ်သူပီပီ ဟိုပစ် ဒီပစ် ပစ်ထားခဲ့မိတာပါ။ လူငယ်ပီပီ အဲဒီတုန်းက အချစ်ကဗျာလေးတွေပဲ အစပ်များခဲ့တာ၊ သူ့ကိုလည်း နင့် အမျိုးသားကို သွားမပြနဲ့နော်လို့ ရှက်ရှက်နဲ့ မှာခဲ့ရပါသေးတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲမှာသာ မိန်းကလေးတွေ ဘရုတ်ကျပြီး ဖလန်း ဖလန်းထနေရင် လူတကာ ပြောချင်စရာ ဖြစ်ပေမဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဆိုတဲ့ နာမည်လေးအောက်မှာ၊ ကျောင်းကြီးရဲ့အရိပ်အောက်မှာတော့ ကျမတို့ ဘရုတ်ကျသမျှ ချစ်စရာ ဖြူစင်သွားပြန်တယ်။ ကျောင်းကြီးရဲ့ အရိပ်ခိုလို့ ပညာသင်ချိန်တွေမှာ ကျမတို့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ဆရာတွေက မေတ္တာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခဲ့၊ ချစ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘယ်အချိန် ပြန်တွေးတွေး ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းတွေဟာ နှလုံးအိမ်ထဲမှာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှိနေကြတုန်း၊ လွမ်းမောစရာကောင်းနေတုန်းပါပဲလေ။
ညီမကေရဲ့ တက်ဂ်ပိုစ့်လေးပါ။ အမှတ်တရ တဂ်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...
at November 08, 2010 28 comments: Links to this post
ဒီနေ့ ကျမရဲ့ဘလောဂ့်လေး တနှစ်တိတိ ပြည့်ပါပြီ။ မြန်လိုက်တာ...။ အချိန်တွေဟာ သွား သွားနိူင်လွန်းတယ်။ တနှစ်အတွင်းမှာ ပို့စ်ပေါင်း ၁၆၀ တိတိ ကျမရေးခဲ့တယ်။ ပျော်စရာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေ၊ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ၊ ခံစားရသမျှ လေးလေးပင်ပင်တွေ၊ မျှဝေချင်စရာ သတင်းတွေ၊ ကဗျာလေးတွေ...စုံလို့ပါပဲ။
ကျမက စာဖတ်မနာခဲ့တဲ့သူ၊ စာမရေးတတ်တဲ့သူပါ။ စာရေးတာကို ဝါသနာပါရုံနဲ့ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ရေးခဲ့တာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ရေးခဲ့သမျှဟာ ကျမ နဲ့ ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့ ကြားသိနေရတာတွေရဲ့ လာရောက် ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ ရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေပါ။ ရင်ထဲ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရလို့၊ ရေးချင်လို့၊ ရေးသင့်တယ် ထင်လို့ ရေးမိတာတွေအတွက် ရေးပြီးတိုင်း၊ ပိုစ့်တပုဒ်အဖြစ် တင်ပြီးတိုင်း ရလိုက်တဲ့ စိတ်ကြေနပ်မှုက ဘာနဲ့မှ မလဲနိူင်အောင်ပါပဲ။
အလုပ်တဖက်နဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးနေကြတဲ့ တခြားသော ဘလော့ဂ်ဂါများ နည်းတူ ကျမလည်း အချိန် ဆင်းရဲပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ရော လူပါ ပင်ပန်းလာတဲ့နေ့တွေမှာ စာရေးဖို့ လက်တောင် မမြှောက်ချင်တဲ့ အထိ ဖြစ်ရတယ်။ တခါတလေကျတော့လည်း ဈန်ဝင်ပြီး စာရေးရင်း ညဉ့်နက်သွားလို့ မျက်တွင်းချောင်နဲ့ ရုံးတက်ရတဲ့ နေ့တွေ ရှိခဲ့ပါရဲ့။ ခုဆို ဘယ်သွားသွား၊ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဘာစားစား ဘလော့ဂ်အတွက် ပိုစ့်လေး စဉ်းစားနေတတ်တော့တာ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျမရဲ့ ပုံမှန် နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲမှာ ဘလော့ဂ်ဟာ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တော့တယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးသူအားလုံး တူတူပဲ ထင်ပါရဲ့။
အငြင်းပွားချင်စရာ၊ အမြင်မတူနိူင်စရာ တချို့ပိုစ့်တွေအတွက် သိနေရက်နဲ့ မရေး မနေနိူင်လို့ ရေးမိတာတွေလည်း ရှိပါရဲ့။ ကျမ ချစ်တဲ့ မျက်စေ့နဲ့ ကြည့်ပြီး ရေးခဲ့တာတွေချည်းပါ။ ကျမကိုယ်၌က အငြင်းပွားချင်စရာပိုစ့်တွေ မရေးဘူးလို့ စိတ်ဒုံးဒုံး မချနိူင်ခဲ့တာ။ ဒီအတွက် ကြည့်တဲ့ ရှူထောင့် မတူလို့ အမြင်တွေ ကွဲကြတာတွေကို ကြိုဆိုလိုက်ရုံပါပဲ။ စီဘောက်မှာ၊ ကော်မန့်မှာ အသားလွတ် ဝင်ထုသွားတာတွေအတွက် အတော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်။ ငိုချင်ခဲ့မိတယ်။ ခုတော့ဖြင့် ကျမ ရယ်နေနိူင်ပါပြီ။ တနှစ်စာ အရေထူခဲ့ပြီကိုး...။
ကျမ ရေးသမျှ လာဖတ်ပေးကြတဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူတွေ၊ ဖတ်ရုံမက ရင်းရင်းနှီးနှီး ချစ်ခင်စွာ မန့်သွားကြတဲ့ ရေးဖော်တွေ၊ မန့်ရုံမက အငြင်းပွားခဲ့ကြ၊ အမြင်မတူလို့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ထုသွားခဲ့ကြသူတွေ... အားလုံးကို ခင်မင်စွာ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ အသက်ဝင်တဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတခု အဖြစ် ပိုမို ပီပြင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ပါ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျမ ပျော်ပါတယ်။ မီးမလာမှပဲ ဘလောဂ့်ရေးတာကို ရပ်ပါတော့မယ်လေ :)
မနှစ်က ဒီလိုအချိန် ၇း၃၈မှာ ကျမရဲ့ ပထမဦးဆုံးပိုစ့်လေးကို ဒီမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်...
at November 06, 2010 49 comments: Links to this post
at November 02, 2010 21 comments: Links to this post